Kedu ihe bụ mmetụta nke Micro vs. Macro-Influencer Strategies | Martech Zone
Infzụ ahịa ahịa dị n'etiti onye ọrụ okwu ọnụ na ị tụkwasịrị obi na mgbasa ozi akwụ ụgwọ ị tinyere na weebụsaịtị. Ndị na-eme ihe ike na-enwekarị ikike ịme ka ha mata ma ha nwere ikike ịmetụta atụmanya na mkpebi ịzụta. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe akpachapụ anya, na-etinye aka iji ruo ndị isi na-ege gị ntị karịa mgbasa ozi ọkọlọtọ, ịmanye ahịa na-aga n'ihu na-ewu ewu.
Agbanyeghị, enwere esemokwu na itinye ego gị na azụmaahịa influencer ka ejiri ya dị ka nnukwu ego ọnụ ọgụgụ ole na ole - nnukwu macro, ma ọ bụ ma a na-etinye ego gị na niche ndị ọzọ, ndị na-emetụta ike - ndị micro influencers.
Nnukwu ego eji eme ihe na nnukwu macron nwere ike daa ma bụrụ nnukwu ịgba chaa chaa. Ma ọ bụ nnukwu mmefu ego ejiri n'etiti ndị na-eme ihe ike nwere ike isi ike ijikwa, ịhazi, ma ọ bụ wuo mmetụta ịchọrọ.
Kedu ihe bụ Micro Influencer?
A ga-ekewa m dịka micro influencer. Enwere m oghere na-elekwasị anya na teknụzụ ahịa na iru elu banyere ndị 100,000 site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, weebụ, na email. Ikike m na ewu ewu m anaghị agabiga lekwasịrị anya nke ọdịnaya m mepụtara yana; dị ka nsonaazụ, ntụkwasị obi nke ndị na-ege m ntị na mmetụta ime mkpebi ịzụta.
Gini bu Macro Influencer?
Macro influencers nwere mmetụta sara mbara karị na agwa. Onye ama ama, onye nta akụkọ, ma ọ bụ onye mgbasa ozi mgbasa ozi a ma ama nwere ike ịbụ nnukwu ihe (ma ọ bụrụ na ndị na-ege ha ntị tụkwasịrị obi ma nwee mmasị na ya). Mediakix na-akọwa nkewa a gbasara usoro ahụ:
Macro influencer na Instagram ga-enwekarị kariri 100,000 eso ụzọ.
Enwere ike ịkọwa macro influencer na Youtube ma ọ bụ Facebook dị ka inwe ọ dịkarịa ala ndị debanyere aha 250,000 ma ọ bụ mmasị.
Mediakix nyochara ihe karịrị 700 nke akwụkwọ nkwado Instagram sitere na ụdị 16 kachasị elu na-arụ ọrụ na nnukwu ndị na-eme ihe ike na ndị na-eme ihe ike iji chọpụta usoro ndị dị irè karị. Ha mepụtara ihe omuma a, ihe a Agha nke ndị na-emetụta ya: Macro vs. Micro ma bia na nkwubi okwu di nma:
Ọmụmụ ihe anyị na-egosi na nnukwu influencer na micro influencer arụmọrụ dị nha anya mgbe nyocha na-adabere na ọnụọgụ njikọ aka. Na mgbakwunye, anyị chọpụtara na macro influencers meriri na usoro nke mkpokọta amasị, ihe, na iru.
Enwere m ike ịgakwuru Jeremy Shih wee jụọ ajụjụ ahụ na-akpali akpali - laghachi azụmaahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na-ele anya gabiga njikọ aka na mmasị, enwere ọdịiche dị oke mkpa na njirimara arụmọrụ dị ka mmata, ahịa, nsogbu, wdg. Jeremy zara n'eziokwu:
Enwere m ike ịsị na akụnụba akụ na ụba na-egwuri egwu ebe a n'echiche nke na ọ dị mfe (obere oge na bandwidth kpụ ọkụ n'ọnụ) iji rụọ ọrụ na obere, ndị ka ibu karịa ịnwale ịhazi narị otu narị ma ọ bụ puku puku ndị obere mmetụta iji nweta otu iru ahụ. Ọzọkwa, CPM na-achọ ibelata ka ị na-arụ ọrụ na nnukwu mmetụta.
Ọ dị oke mkpa na ndị na-ere ahịa na-eburu nke a n’uche ka ha na-ele anya ire ahịa. Ọ bụ ezie na nhazi zuru oke na mgbasa ozi micro-influencer dị egwu nwere ike mepụta mmetụta ka ukwuu na njedebe, mbọ dị mkpa nwere ike ọ gaghị aba uru itinye ego na oge na ume. Dị ka ihe ọ bụla na ire ahịa, ọ bara uru ịnwale ma jiri usoro mgbasa ozi gị rụọ ọrụ.
Echere m na ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na nke a dabere na Instagram ma ọ bụghị ndị ọzọ na-ajụ mmụọ dị ka ịde blọgụ, pọdkastị, Facebook, Twitter, ma ọ bụ LinkedIn. Ekwenyere m na ngwa ọrụ ọhụụ dị ka Instagram nwere ike ịghasa nsonaazụ nke nyocha dị ka nke a n'ụzọ dị mkpa maka amara.
Tags: akwa nchara americannchikotadaniel Wellingtongilletteemetụtainfographicinstagramnnukwu mmetụtaogbakommetụta microUzoukwusephora
Ọkt 7, 2017 na 2:19 AM
O doro anya na ndị na-emetụta ya bụ akụkụ dị mkpa nke usoro azụmaahịa, ọkachasị n'ọnọdụ B2B. Maka onye na-eme mkpebi B2B, onye ndu nke onye na-ere ahịa bụ isi. Ọ bụrụ na onye nwere ike nwee ike ịkwado onye na-ere ya ọ ga-agbakwunye ntụkwasị obi ọzọ. Na ThoughtStarters (www.thought-starters.com) anyị arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ụwa niile na-enyere ha aka ịkọwapụta ma na-agba ọsọ mmemme mmemme ha & anyị na-ahụ na ọtụtụ oge ha anaghị achọpụta ndị na-emetụta ya. Eg: Maka onye ahịa ụwa zuru ụwa ọnụ, anyị kwuru na enwere ike iji Academia na mahadum ndị isi mee ihe dị ka isi ihe na-emetụta ihe. Anyị wuru mmemme nke soro ha rụọ ọrụ & site na nke a onye ahịa ahụ nwere ike mepee ụzọ ọhụụ ọhụụ echebeghị tupu ha etinye aka na atụmatụ njikọta ha & wee malite ịghọrọ ROI. N'ihi ya, ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ịchọpụta ndị mmekọ nwere ike inyere ha aka inweta ego karịa maka atụmatụ itinye aka na mmetụta ha.